Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → décembre → 26 → Ambohimanga Rova : Lehilahy iray matin’ny fitsaram-bahoaka
Disadisam-piarahamonina nitarika hatrany amin’ny fahafatesana. Lehilahy iray tokoa no matin’ny fitsaram-bahoaka ny alatsinainy teo tany amin’iny kaominina Ambohimanga Rova iny. Rangahy manodidina ny 65 taona izy io ary araka ny fantatra dia efa hananan’ny fiaraha-monina lonilony noho ny toetra tsy zaka asehony. Tamin’io fotoana io dia tratry ny fokonolona teo am-panenjehana ankizivavy avy natsaka ny lehilahy. Tsy fantatra hatreto hoe saika ataony inona io ankizivavy nenjehiny io ny olona izay nahita no avy hatrany dia nandray izany ho zava-dratsy ka rafitra nanenjika azy ihany koa. Tsy ela dia voasambotra ilay rangahy ary rafitra teo ny fidarohana. Ny sasany tamin’ireo fokonolona izay angamba efa niandry kendry tohana fotsiny, hanamparana ny hatezerany tamin’ity rangahy ity no avy hatrany dia nitoraka tapa-biriky azy. Nanaraka tamin’izay ny hafa. Nirara-kompana ny tora-bato sy ny toraka biriky nahazo ilay rangahy. Tsy namelan’ireo fokonolona raha tsy nahetsika intsony sy nitolefika ity rangahy lehibe, efa naratra mafy. Nisy tamin’ireo nahita no nampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana teny an-toerana saingy ny fotoana nahatongavan’ireo farany teny an-toerana, dia efa namoy ny ainy ilay lehilahy. Araka ny angom-baovao azo dia toa hoe mpila sotasota amin’ny fiarahamonina misy azy rangahy io ary efa maro ireo olona mitaraina noho izany toetrany izany. Tsy vitan’izany ihany angaha, araka ny fantatra hatrany fa dia vitany mihitsy ny mandrahona olona. Antony maromaro izay nampitraotra tanteraka ireo fokonolona naneho ny hatezerany tamin’ity izy tratra nanenjika mpantsaka ity. Na izany na tsy izany aza anefa dia azo sokajiana ho vono olona tsotr’izao ary niniana natao ny zava-nitranga toy izao. Tsy maintsy nanokatra ny fanadihadiana mahakasika ity fitsaram-bahoaka ity araka izany ireo tompon’andraikitry ny filaminana teny an-toerana.
Odva 28 décembre 2018 at 17 h 57 min · Edit
Na dia mpisotasota sy mpandrahona olona araky ny angombaovao honohono , inona no Antony tsy nametrahan’izay voakasika fitoriana ??? »
Ka satria zara raha voasazy, dia avy eo manao ny ataony eny ihany ireo olona ratsy mpanao an’io!
io tsy misy resaka sokajy taona fa refa manao ratsy ka tsy andray ny andraikiny ny mpitandron’filaminana, dia aleo ny vahoka no hanao ny handray andraikitra.
Liliane Averty 26 décembre 2018 at 14 h 39 min · Edit
Na dia mpisotasota sy mpandrahona olona araky ny angombaovao honohono , inona no Antony tsy nametrahan’izay voakasika fitoriana ??? Ilay Ankizy vavy lazaina ho nohenjehiny ??? Tokony mba natao ny fanadihadiana fa hoatran’ny te
hide foulee izany ny olona sasany vao misy hanararaotana dia mamonono olona ohatran’ny mamonono ankoho . Tondromolotra sy honohono alako bika sy tsy Tiako Tarehy araky ny expression …tsisy fanadihadiana sy fanazavana fa avy hatrany dia mamonono manala aina . Hafatra ho an’izay nanafaka ain’olona rehetra n’inona n’inona Antony hanaraka anareo mandra-mpikin’ny masonareo ny fangirifirin’ireo olona Maty novonoinareo ireo .aza adino aoka ho aminareo ny sary ny Ora farany nanafahanareo ny AINA…
Tsinjo 26 décembre 2018 at 8 h 45 min · Edit
Vono olona nataon’olom-bitsy sahirana sy romotra amin’ny fitadiavana ka mialokaloka amin’ny anarana hoe « vahoaka ». Dia olona 65 taona ve no ho naninona?
Mampalahelo fa lasa tsy mifantoka amin’Ilay fanomezana lehibe nataon’Andriamanitra ny olona rehefa krismasy fa variana mifaninana sy mieritreritra fiadanana ara-materialy. Rehefa tsy tratra io dia tsy maintsy misy olona omena tsiny sy anamparana ny tsy fahatomombanana eo amin’ny tena fa tsy te ho tompon’andraikitra.